Ungayifaka kanjani i-OS X El Capitan ngaphandle kwe-akhawunti kanjiniyela | Ngivela kwa-mac
Ungayifaka kanjani i-OS X El Capitan ngaphandle kwe-akhawunti kanjiniyela
UJordi Gimenez | | I-Mac OS X, I-OS X El Capitan, Izifundiswa
Omunye wemibuzo oza kimi kakhulu ukuthi singasebenzisa i-OS X El Capitan beta 1 njengohlelo olusebenzayo futhi impendulo yami iyefana njalonjalo, kungcono ukulinda inguqulo esemthethweni. Yebo, manje sizobona ukuthi ungayifaka kanjani i-OS X El Capitan beta ngendlela elula kakhulu futhi ngaphandle kokuba ngunjiniyela ku-Mac yethu, kepha iseluleko sami ukuthi uma kufanele usebenze neMac, ungafaki lolu hlelo lokusebenza njengeyona eyinhloko ngenxa yokungavumelani ongakuthola, dala ukwahlukanisa okusha noma ulinde nje ukuthi yethulwe ngendlela ecacile engeyona ende kangako.
Uma ngabe ngalesi sincomo somuntu siqu sokulinda inguqulo esemthethweni sifuna ukufaka i-OS X El Capitan, kungcono ukusebenzisa umuntu omjwayele wakudala: IDiskMaker x futhi a I-8GB USB Ithunyelwe ku-Mac OS Plus (Iphephabhuku). Okokuqala kunakho konke gcina isipele se-Mac yethu, kungaba nge-Time Machine noma nge noma oyithandayo, ngale ndlela uma sinenkinga siyohlala sinesipele sokuphepha.
Isinyathelo esilandelayo landa i-OS X El Capitan, dala ukwahlukanisa kwi-hard drive yethu noma usebenzise yangaphandle ukwenza ukufakwa. Manje sekuyisikhathi sokulandela okokufundisa okujwayelekile ngaleli thuluzi elikhulu esilibonile ezikhathini ezedlule.
3 Ukufaka i-OS X El Capitan beta
Dala isifaki ngokulandela nje izinyathelo.
Sixhuma kwi-Mac the I-USB noma i-8GB ikhadi le-SD ukuqhubeka nokufakwa. Le USB / SD izosulwa unomphela ngakho-ke kungcono ingabi nalutho ukugwema izinkinga ngokuhamba kwesikhathi. Siqala iDiskMaker y chofoza kukho faka i-OS X Yosemite (Uma kucace ukuthi yi-El Capitan kepha ayiveli ku-DiskMakerx) ebesikade siyilandile ku-Mac yethu - kufolda yezicelo noma noma yikuphi lapho sinakho khona-ke izosicela iphasiwedi yomlawuli, siyifaka futhi chofoza ukuqhubeka.
Manje kufanele silinde inqubo ukuqeda futhi uma kuthatha ukuthula okuncane, kuyinto ejwayelekile. Uma kungenjalo vala uhlelo, nqamula i-USB / SD noma cisha ikhompyutha ngaphambi kokuba iqede. Uma sesiqedile singaqala inqubo yokufaka emshinini wethu.
Ukufaka i-OS X El Capitan beta
Manje sixhuma i-USB kwi-Mac bese sicisha iMac yethu ne-USB / SD exhunywe. Siqala kabusha umshini ngokucindezela inkinobho Alt ukuze imenyu yokuqala ivele, sikhetha imemori ye-USB, idiski noma ikhadi le-SD lapho sinesifaki se-OS X El Capitan bese uqhafaza khona. Manje kufanele silandele izinyathelo zokufaka ku-partition noma i-disk esiyifunayo bese siqala ukufakwa kwe-OS X El Capian ngezinyathelo ezibonisiwe.
Ungashiya noma imiphi imibuzo kumazwana futhi sizozama ukuwaxazulula, kepha inqubo ilula kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » I-Mac OS X » I-OS X El Capitan » Ungayifaka kanjani i-OS X El Capitan ngaphandle kwe-akhawunti kanjiniyela
Kusuka kuphi ukulanda i-OSX El Capitan?. Inhloso yami ukudala umshini obonakalayo kokufana bese ngiwufaka lapho.
Sbongiseni (@sbongiseni) kusho
uma uzohlola i-beta ye-OSX El Capitan entsha - yenza ukwahlukanisa kudiski okusetshenziswayo noma ukwenze kwenye idiski .. kodwa ungayisebenzisi njengesibuyekezo sediski enkulu .. futhi ungayisebenzisi ICloud account noma .. lokhu ngoba imisebenzi ethile Izotholakalela i-iOS9 kuphela, ne-mac OS 10.11 .. futhi uma bebuyekeza lezi zinto manje ngeke besakwazi ukuzisebenzisa kuYosemite noma eMaverick ngokuya ngokuthi bakuphi. isibonelo .. Amanothi yilokho okufanele ngikubone njengesixwayiso ku-iOS9.
Okuthile okufanayo kwenzeke nge-ICloud Drive ... manje itholakalela iYosemite kuphela futhi ngaphambi kokuyisebenzisa nayo yonke enye i-OSX, uma uyivuselele ingasakwazi ukusetshenziswa kuma-macs nge-Mavericks noma ngaphambili.
Phendula ku-Cristian  (@ccontreras)
UJonny Palazuelos kusho
Sawubona, ngizamile ukufaka i-OS X El Capitan kusukela ekuqaleni, ekuqaleni kokufakwa icela i-ID yami ye-Apple, ngiyibeka kepha ayikaze iyibone iphasiwedi yami, ngemuva kokuthi umzamo wesithathu u-Apple uyivimbile futhi kwadingeka ngivule kusuka kwenye ikhompyutha, kepha kusenjalo. Ngizamile nokufaka ngaphandle kwe-inthanethi kepha ayingivumeli. Noma yimuphi umbono ukuthi kungenzeka kwenzekani ??? Ngiyabonga ngosizo lwakho.
Phendula uJonny Palazuelos
Sawubona Jonny, unayo i-akhawunti yonjiniyela? Uma kungenjalo, awudingi nhlobo i-Apple ID, okudingekayo yiphasiwedi yomlawuli we-Mac.
U-Erick navarro kusho
Bengithi sengiqedile ukufaka futhi iwindi seliphenduke laba mhlophe futhi kuvela izinketho "emuva" no "phambili" kuphela, ngicindezela phambili kungenzeki lutho, ngingenzani?
Phendula u-Erick Navarro
Kungenzeka ukuthi i-OS X oyifakile inokuthile okungahambi kahle. Kungcono ukuqala kusuka ekuqaleni futhi ngesinye isifaki.
Nginenkinga enkulu, ngihambile kuzo zonke izinyathelo ngafometha iMac yami ... Futhi lapho sekuyisikhathi sokuyicisha futhi ngiyenze futhi ... Ukucindezela i-Alt ... Idiski engilidale ku-8G USB yami alisebenzi ungibone ... Nge-Diskmaker X ... Sikhona isisombululo?
Phendula uJosé Antonio
Ungalanda kabusha i-OS X El Capitan kepha kulokhu kusuka enguqulweni esemthethweni esivele itholakala ku-Mac App Store kusuka kwenye iMac yalowo osebenza naye / umngani noma zama lokhu, okungukulanda i-OSX online.
Ngizamile ukufaka i-i-Capitan kepha icela i-akhawunti ye-Apple.Ngiyifaka kweyami futhi ngeke ingivumele ngiyifake.Kufanele ukuthi kushiwo ukuthi i-mac book air akuyona eyami, ivela kwiklayenti kodwa yona ayikhumbuli i-akhawunti yabo, ngingalulayisha kanjani uhlelo lokusebenza?
Ucabanga ukuthi iMacBook entsha yehluleka ukuxhumeka?, I-OWC imemezela idokodo layo le-USB-C elizayo ngamachweba ayi-11
I-Apple iqasha indawo enkulu yamahhovisi ePittsburgh ngaphakathi kwephrojekthi ye-3 Crossings